တရုတ် Cone ရန် Bobbin ချည်ခင်စက်အကွေ့အကောက်များသော - တရုတ်တရုတ် Cone ရန် Bobbin ချည်ခင်စက်ပေးသွင်းအကွေ့အကောက်များသော,စက်ရုံ -FEIHU
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >ကုန်ပစ္စည်း >ချည်ခင်အကွေ့အကောက်များသော machine >စက်အကွေ့အကောက်များသော Cone မှ Cone
တရုတ် Cone ရန် Bobbin ချည်ခင်စက်အကွေ့အကောက်များသော
လျှပ်စစ် Feed Hanks စေရန် Cone ဓာတု Fiber ပိုးချည်ခင်ဓာတုဖိုင်ဘာပိုးချည်အဘို့အသင့်လျော်စက်အကွေ့အကောက်များသော.
စက်အကွေ့အကောက်များသော Cone စေရန် Cone
Cone အကွေ့အကောက်များသောစက်ချည်ကြိုးအတှကျစုံလင်သောကြိုးပုံသဏ္ဍာန်အကွေ့အကောက်များသောအသုံးပြုသည်,ဖန်စီကြိုး,polyester,နိုင်လွန်,သိုးမွှေးကြိုး,စစကြိုး,ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့်များစွာသောအခြားအထူး yarns.Slub Catcher, စင်ကြယ်သောခရီးသွားနှင့် auto-မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ် device ကိုရွေးချယ်နိုင်ခွင့်စက်ပင်လယ်ရပ်ခြားပြည်တွင်းအတွက်ပူရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီးများမှာ.
ဒါဟာကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သည်, ထိုကဲ့သို့သောဓာတုပိုးအဖြစ်,အတုပိုး, ရွှေငွေပိုး, ပုံပျက်သောပိုး, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး, လွယ်ကူသောထိန်းသိမ်းထား. အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီလည်း install လုပ်ထားရနိုင်သလား, ရေနံဖယောင်း, နှင့်ကြိုးထောက်ခံမှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှု devices များ, နောက် ... ပြီးတော့. ခြွင်းချက်အရည်အသွေးကိုကမ်းလှမ်းရန်, တစ်ခုမယှဉ်နိုင်တဲ့စျေးနှုန်းမှာကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ.
FH230B 500g Cone စေရန် Cone ချည်ခင်စက်အကွေ့အကောက်များသော
12 ဗိုင်းလိပ်တံ / set ကို, 4ဗိုင်းလိပ်တံ / အုပ်စုတစ်စု, စုစုပေါင်း 48spindles / 4sets
L4300mm x ကို W500mm x ကို H1000mm (12 ဗိုင်းလိပ်တံ)
ဖောက်သည်ထံမှနမူနာ bobbin ကိုကြည့်ပါ
စစ်ဆင်ရေး၏ Form ကို
8ကီလိုဂရမ် - 10ကီလိုဂရမ် / ဗိုင်းလိပ်တံ(အတွင်း 24 နာရီ)
စက္ကူ rayon ကန်တော့ချွန်သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ် bobbin, 150မီလီမီတာ-290mm
220v, တစ်ခုတည်းအဆင့်, 50Hz
ဓာတုပိုး, အတုပိုး, ရွှေငွေ, ပုံပျက်သော.
350မီတာ / မိနစ်
လွန်ခဲ့သော : စက်အထည်အလိပ်အကွေ့အကောက်များသော ConeYARN စေရန် Cone
နောက်တစ်ခု : ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူနှစ်ချက် side Cone စေရန် Cone အကွေ့အကောက်များသောစက်